gauge Rikoo နှင့် P3D V4 နေဖြင့်ထည့်သွင်း
မေးခွန်း gauge Rikoo နှင့် P3D V4 နေဖြင့်ထည့်သွင်း
4 လအတွင်း3weeks ago #1269 by al1191
Rikoo သဟဇာတ P3d V4 အစီရင်ခံတင်ပြပေမယ့် P3d V4 နှင့်အတူပြဿနာများကိုဖြစ်စေသည့်ထားတဲ့အချို့လေယာဉ်များ gauges ဖြည့်စွက်:
က 32-bit ရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ "CALLOUT_SOUND" အလုပ်မလုပ်ပါဘူး
ဒါဟာဖြင့်အစားထိုးရမည်ဖြစ်သည် "dsd_p3d_xml_sound_x64!" Doug Dawson ရဲ့ website တွင်တွေ့ရှိရ
အဆိုပါ gauge script ကို "HoneywellFMC_Grey_Riko!" အလွန်အကျွံ programming ကိုအမှားရှိပြီးအလုပ်မလုပ်ပါဘူး။
ကြှနျတေျာ့အင်္ဂလိပ် "Google ကဘာသာပြန်ချက်" ကိုငါ့အလိုရှိသမျှတောင်းပန်အတူ
4 လအတွင်း2weeks ago -4လအတွင်း2weeks ago #1271 by rikoooo
, al1191 မင်္ဂလာပါ
-on ကို add ထားတဲ့အတှကျအသငျသညျအကြောင်းပြောနေတာလဲ? HoneywellFMC_Grey_Riko သင်သည် add-on တစ်ခု Prepar3D v4 သဟဇာတမှတ်သားမဟုတ် installed ရှိသည်ဟုမဟုတ်လျှင်ငါအဖြစ်ကောင်းစွာမတိုင်မီဒီ check လုပ်ထား, နှင့် (dsd_p3d_xml_sound_x64 Callout_Soud အတွက်အမည်ပြောင်းသော) Callout_Soud.dll ရှိသည်ဟုကြည့်သဟဇာတ P3Dv4 ဖြစ်ပါတယ်။ မြေတပြင်လုံးစာရင်းကဒီမှာကိုရှာဖွေပေးပါ: www.rikoooo.com/prepar3d-v4 .
နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်:4လအတွင်း2လွန်ခဲ့တဲ့ရက်သတ္တပတ်များက rikoooo.
4 လအတွင်း2weeks ago #1272 by al1191
ငါသည်သင်တို့ကို download ပြုလုပ်အဆိုပြုထား (Beriev နှင့် Boeing က c-3-4X BE) က PD200 V32 အတွက်နှစ်ခုလေယာဉ် installed:
အောက်တွင်နှင့်တစ်ဦးချင်းစီလေယာဉ်ပျံများအတွက်သင်သည်အမှားများစာရင်းကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်, အခြို့ကိုပိုပြီးနူးညံ့သိမ်မွေ့သောအခြားသူများကိုပြင်ပေးဖို့လွယ်ကူ, P3D V4 (ContentErrors.txt) ကအစီရင်ခံသည်နှင့်ဖိုင်များခြင်းဖြင့်အုပ်စုဖွဲ့:
Beriev BE-200X (ငါပြင်ဆင်ချက်လုပ်နဲ့ကျွန်မလေယာဉ်ထားရှိမည်)
ပျောက်ဆုံးနေမှတ်ချက် (//) ရက်တွင်
ref 1: ဂျိန်းရဲ့အားလုံးကမ္ဘာ့လေယာဉ် 2002-2003 Ed က
ref 2: Be-200 3-အမြင်ပုံဆွဲ
ref 3: အမျိုးမျိုးသောအင်တာနက်ကိုက်ဘ်ဆိုက်များ
Key ကိုအမည် Duplicate: DIFFERENTIAL_BRAKING_SCALE
: D: \_ Program Files \_ Lockheed Martin ကုမ္ပဏီမှ \_ Prepar3D v4 \_ gauge \_ CALLOUT_SOUND.dll, gauge: သံကိုအမှား = ကို C-စတိုင် gauge မအောင်မြင်ပါ။ DLL ကို 32 bit နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးက 64 bit ဗားရှင်း (ဈထင်) ကိုအထုပ်အားဖြင့် required.This စာကြည့်တိုက်ကို install ဖြစ်ပါတယ်နှင့် Gauge50 ဖြင့်သင့်ကိုခေါ်နေသည်
BE200 \_ hhRMI_compass_highlight.bmp: RMI_SQ ပျောက်ဆုံး gauge image file ကိုမှန်း
မိတ္တူပွား Key ကိုအမည်ပုဒ်မ: Window05 Key ကို: window_pos
Boeing က c-32 (များလွန်းနေပြင်ဆင်ချက်ဖြစ်စေခြင်းငှါ, ငါလေယာဉ်များကိုမစောင့်ဘဲ)
Key ကိုအမည် Duplicate: gear_motor
Key ကိုအမည် Duplicate: marker_beacon
: D: \_ Program Files \_ Lockheed Martin ကုမ္ပဏီမှ \_ Prepar3D v4 \_ gauge \_ CALLOUT_SOUND.dll, gauge: သံကိုအမှား = ကို C-စတိုင် gauge မအောင်မြင်ပါ။ DLL ကို 32 bit နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးက 64 bit ဗားရှင်းလိုအပ်ပါသည်။ ဒါဟာစာကြည့်တိုက် (ဈထင်) ကိုအထုပ်အားဖြင့်ထည့်သွင်းခြင်းနှင့် Gauge122 ဖြင့်သင့်ကိုခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်, Gauge33 [VCockpit01]
Window08 window_pos: Key ကိုအမည်ပုဒ်မ Duplicate
B767 \_ hhRMI_compass_highlight.bmp: RMI_SQ ပျောက်ဆုံး gauge image file ကိုမှန်း
B767 \_ Gear_light_up.bmp: Gear_Light_L နှင့် Gear_Light_C နှင့် Gear_Light_R gauge image file ကိုပျောက်ဆုံးနေမှန်း
B767 \_ MFD1_Ownship.bmp: gauge image file ကိုပျောက်ဆုံးနေ Multi-Function Display ကိုမှန်း
FMC [Empty ကွင်းသို့မဟုတ်ပိတ်ကွင်းပျောက်ဆုံး] သို့မဟုတ် [- ဖြစ်ကောင်းတဲ့အာကာသပျောက်နေသို့မဟုတ်တစ်ဦးအပိုဆောင်းအာကာသရှိပါတယ် command ကိုမတွေ့ရှိ] တူသောပိုပြီး 150 Script မှားယွင်းနေသည်ရှိပါတယ်။
4 လအတွင်း2weeks ago -4လအတွင်း2weeks ago #1274 by rikoooo
BMP သို့မဟုတ်ပုံတူသော့ပျောက်ဆုံးဒါအပေါ်အရေးမပါဖြစ်ကြပြီးလုံးဝလျစ်လျူရှုထားနိုင်ပါတယ် ပတ်သက်. FMC အတွက်အမှားအယွင်းများ။
သင်တစ်ဦးပရိုဂရမ်မာသို့မဟုတ် XML ကို gauge အကြောင်းကိုအလွန်ဝါသနာအိုးတွေဟာမဟုတ်လျှင်ကိုလည်းသင်မဟုတ်ရင်သင် P3D ပိတ်ပစ်နှင့်နှောင့်အယှက်မယ့်အခါတိုင်းပေါ်လာပါလိမ့်မယ်, အ P3D config ကိုအတွက်အမှားအယွင်းများ (Debugging) ၏သစ်ထုတ်လုပ်ရေးကို disable သငျ့သညျ။
အဘယ်အရာကိုဒီနေရာမှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည် DLL ကိုတစ်ဦး 32 နည်းနည်းဖြစ်ခြင်း ပတ်သက်. အမှားသောပုံမှန်ပေမယ့်ဖြေရှင်းရန်အလွန်လွယ်ကူမယ့်သည်:
သင့်ရဲ့ Prepar3D v4 ၏ folder ကို "gauge" ကိုသွားပါ -> (က C: \_ Program Files \_ Lockheed Martin ကုမ္ပဏီမှ \_ Prepar3D v4 \_ gauge) နှင့်ဖိုင် "CALLOUT_SOUND သတ်မှတ်ပြီးဆက်လက်။gauCALLOUT_SOUND "နှင့်ကဖယ်ရှားလိုက်ပါ။ သို့သော်ဖယ်ရှားပစ်ကြဘူး" ။DLL"ဒီဖိုင်ကိုစေ 64-bits (file တွေကိုတူညီတဲ့အမည်များပေမယ့်ကွဲပြားခြားနားတဲ့ extension ကို .gau = 32bits နှင့် .dll = 64-bits ရှိသည်) ။ ဒါကြောင့်ဖွင့်သည်။
မှတ်ချက်: "CALLOUT_SOUND.gau" မတည်ရှိပါဘူးဆိုရင်, ထို့နောက်ရိုးရိုးအခုသေချာအားလုံးကိုအကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ် "ဟု CALLOUT_SOUND.dll" နှင့် re-install ဘိုးအင်းကို C-32 ဖယ်ရှားလိုက်ပါ။
အောက်ပါအသုံးပြုသူ (s) ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည် said: al1191
0.378 စက္ကန့်: စာမျက်နှာကိုဖန်တီးရန်အချိန်